Afa-tsorisory vetivety ! | NewsMada
Afa-tsorisory vetivety !
Par Taratra sur 17/07/2018
Vita ny fiadiana ny tompondaka eran-tany amin’ny baolina kitra. Iray volana nampisinda kely ny sorisorin-tsaina teo amin’ny Malagasy. Nanadinoana ny vetivety ny vetsatry ny adim-piainana sy ny tebitebin’ny tsy fahandriampahalemana, sns. Tonga aloha i Dada fa maika hijery baolina. Tafavory anaty efitrano iray ny mpianakavy. Tranga tsy fahitan’ny tokantrano malagasy firy intsony satria rotoroto ny fiainana!
Fahiny anefa, zary fomba amam-panao ny dinidinika ambany tafon-trano, tafatafa amorom-patana, sns. Fotoana nikoloana sy nanabeazana ireo taranaka. Fanomezana torolalana nikendry hatrany ny hampirindra ny fiarahamonina. Nampitana ireo fomba amam-panaon’ny fianakaviana nipoirana. Nampitana ny tetiarana nipoirana, sns.
Tsy hisy isan’andro isan’andro anefa ny « Mondial ». Na mafy aza ny fiainana, tsy maintsy ny Malagasy isan-tokantrano ihany no mitady hevitra sy irika hahafahana mamerina indray io dinidiniky ny mpianakavy io. Tena ilaina io ary tsy ho voavidim-bola ny soa azo avy aminy satria tsy ny hoavin’ny taranaka ihany no tsara rafitra fa ny hoavin’ny firenena iray manontolo mihitsy.
Noho ny tsy fisian’ny dinidinika amorom-patana intsony, ohatra, teraka ny fanamaivanan’ny tanora ankehitriny ny fototra nipoirany sy ny hafatra napetrak’izy ireny. Saika miaina anaty ota fady ny sasany hany ka volavolain’ny hafa araka izy itiavany azy. Tsy hita intsony ny maha izy ny tsirairay. Misy aza tonga hatrany amin’ny fahaverezan-kasina mihitsy, saingy toa tsy mampaninona azy ireny izany… Izay ilay vokatry ny tsy fahampian’ny dinidinika!
Raha hiandrasana vahiny na hiandrasana « Mondial » vao hihaona ny ankohonana iray, ho ratsy taiza ny taranaka malagasy… Sanatria, sanatria, sanatria, ho lasan’ny vahiny ambongadiny i Madagasikara sy ny hareny atsy ho atsy.